Malunga nathi | Hangzhou Immuno Biotech
I-Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd.yinkampani esekwe kwi-R & D ebekwe eHangzhou. I-Immunobio yaziwa ngokuba yiprotein yoyilo yokuqala kunye nomthengisi kumazantsi e-vitro diagnostic field. I-Immunobio ikwangumvelisi ovavanyiweyo okhawulezileyo nobuchwephesha oqhubele phambili kubuchwephesha bezilwanyana kunye nonyango lokuqonda isifo. I-Immunobio inamalungelo awodwa abenzi abagunyazisiweyo angaphezu kwe-30 kwicandelo le-IVD kwaye ngaphezulu kwama-20 aphantsi koqwalaselo.
Ukulwa ubhubhane we-COVID-19, i-Immunobio iphuhlise uthotho lovavanyo lokuchonga ngokukhawuleza kwi-COVID-19. Kwasekuqaleni kukaFebruwari 2020, sakhupha i-Coronavirus COVID-19 IgG / IgM Antibody Rapid Test yovavanyo lwe-IgG kunye ne-IgM. Ke ngo-Septemba, i-Immunobio iphumelele ngempumelelo i-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (i-COVID-19 Ag) ukuxhasa uvavanyo olukhawulezayo lovavanyo lwe-antigen. NgoDisemba 2020, inoveli yeSARS-CoV-2 engathathi hlangothi kuvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody (i-COVID-19 Ab) yaphuhliswa ngempumelelo, ukubonisa imeko yokhuselo lwee-antibodies ezithomalalisayo egazini labantu.
I-Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd.wenza kwaye uya kuqhubeka nokwenza uphando kunye nophuhliso kwicandelo lokuchonga unyango lwe-IVD. I-Immunobio iya kusigcina isithembiso sethu sokubonelela ngeemveliso ezintsha nezikhuphisanayo kwihlabathi elisempilweni.
I-Immunobio ibonelela ngazo zonke iimveliso ngokulandela ngokungqongqo nenkqubo yolawulo lomgangatho. Sisebenzisa inkqubo yolawulo lomgangatho ye-ISO9001 kunye ne-ISO13485 ukuqinisekisa umgangatho weemveliso zethu, kunye nenkqubo yoLawulo lwePropathi yokuKhusela ukukhusela iipropathi ezinengqondo zabathengi bethu kunye nathi. I-Immunobio ibonelela ngeeproteni zayo eziphindaphindayo, ezinje ngeprotein ye-recombinant N, S protein, NS chimera protein ye-SARS-CoV-2, kumaqabane ethu ovavanyo akhawulezileyo ovavanyo. I-Immunobio ikwabonelela ngemveliso yefomathi yeshiti engafakwanga kumaqabane ethu ehlabathi. I-Immunobio ikwabonelela ngovavanyo olukhawulezileyo kunye neenkonzo zeelebhile ze-OEM / zabucala kubathengi bethu kuzo zonke iimbombo zehlabathi.
Abantu sisiseko sophuhliso lweshishini. Ngaphandle kwabo bonke abasebenzi bethu, inkampani yethu ibinokuba nzima ukuyiphuhlisa. Ke ngoko, kwimisebenzi yemihla ngemihla, inkampani yethu ikhathazekile kakhulu nangononophelo lomsebenzi. Ukongeza ekunikezeleni abasebenzi izipho zentlalontle ezifanelekileyo ngeeholide, sikwaququzelela abasebenzi ukuba bathathe uhambo kunye nesidlo sangokuhlwa, ukuze abasebenzi baphumle emva komsebenzi.